Isiqalisile Imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League
Imidlalo yenguqu eyesigaba saphezulu eseCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili ngalimpelaviki ngemva kokudedela imidlalo eyenkezo yeChibuku ngempelaviki edluleyo. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Imidlalo yeviki lamatshumi amabili lathoba minwe mbili iqale ngoLwesihlanu lapho iqembu le Shabanie Mine lele Chicken Inn abengutshiki lobhanqa 1 ka 1 enkundleni ye Maglas njalo limpumela itsho ukuba amathuba eqembu le Chicken Inn awokuphakamisa isicoco lonyaka aya elokhu encipha.
Imvimbi uJohn Passmore Bernard nguye ohlohlele iqembu le Chicken Inn ngehlandla lakuqala kuthi ukaputeni weqembu Shabanie Mine uFarai Mupasiri nguye ohlohle igoli lokulinganisa ngehlandla lesibili elomdlalo.
Imidlalo iqhubeka phambili kusasa ngoMgqibelo lapho iqembu le Bulawayo City elizemukela khona ele Ngezi Platinum Stars, elingelinye lamaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco, enkundleni ye Barbourfields.
Iqembu le Tsholotsho lizadibana lele Chapungu ngase Dulivhadzimu, ele ZPC Kariba lizangqikilana lele Dynamos ngase Nyamhunga, ele Yadah lizadlala lele Black Rhinos ngase National Sports Stadium, iHarare City izemukela iqembu le Bantu Rovers eRufaro kuthi iqembu le How Mine lizadlala lele Hwange enkundleni ye Luveve.
NgeSonto kulemidlalo emibili njalo kowakuqala iqembu le Highlanders lizadibana lele FC Platinum enkundleni ye Barbourfields. Ngeviki yamatshumi amabili lesikhombisa iqembu le Bosso litshaye ele Chicken Inn nge 4 ka nya njalo umqeqetshi walo uErol Akbay uthi ukuma ukudlala kudedelwa umncintiswano we Chibuku kungabe kubaphazamisile abafana bakhe abakade sebedlala kuhle ngemva kwemidlalo embalwa bedonsa nzima.
“Iqembu le FC Platinum ngelinye lamaqembu aqine kakhulu kwele Zimbabwe njalo ukungadlali ngempelaviki edluleyo kulakho ukuba kuphazamise indlela esidlala ngayo kodwa ngakwelinye icele kuphe ithuba abadlali bathu abakade belimele ukuba bephole.”
Umdlalo wesibili ozadlalwa ngeSonto uzakuba phakathi kweqembu le CAPS United lele Triangle enkundleni ye National Sports Stadium esigodlweni iHarare.